११ क्षेत्रको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक,... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
११ क्षेत्रको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक, कहाँ कसले जिते?
पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको ३२ जिल्लाका ३७ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अपरान्ह १२ बजेसम्म ११ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। जसमध्ये वाम गठवन्धनले ९ सिट जितेका छन् । कांग्रेस र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले १-१ सिट जितेका छन्।
प्रतिनिधि सभातर्फ वामका ३ उम्मेदवार विजयी भएका छन्। मनाङमा एमालेका पाल्तेन छेवाङ गुरुङ, मुस्ताङमा प्रेम तुलाचन विजयी भए। यस्तै रूकुमपूर्वमा माओवादीकी कमला रोका विजयी भइन्।
प्रदेशसभामा को विजयी
हालसम्मको परिणाम अनुसार प्रदेशसभातर्फ ८ स्थानमा अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रदेशसभामा एमाले ४, माओवादी २, कांग्रेस १ र स्वतन्त्र १ सिट जितेका छन्।
मुस्ताङका क र ख दुवै क्षेत्र एमालेले जितेको छ। मुस्ताङको प्रदेशसभा (क) मा एमालेकै इन्द्रडादु विष्ट, प्रदेश सभा (ख) मा महेन्द्रप्रसाद थकाली विजयी भएका छन्। हुम्ला क मा दलबहादुर रावल विजयी भएका छन् भने डोल्पा क मा एमालेकै नन्दसिंह बुढा विजयी भएका छन्। यस्तै बाजुर क मा बलदेव रेग्मी विजयी भएका छन्।
पूर्व रुकुमका दुवै प्रदेशमा माओवादीले जित हात पारेको छ। क मा तेजबहादुर ओली र ख मा पूर्णबहादुर घर्ती विजयी भएका छन्।
नेपाली कांग्रेसबाट मनाङ क मा चिन्तबहादुर घले विजयी भएकी छन्। मनाङ ख मा स्वतन्त्र उम्मेदवार राजीव गुरुङ तर्फ दीपक मनाङ्गे विजयी भए।
अग्रता कहाँ कसको?
अहिलेसम्म नेकपा एमालेले २१ स्थानमा अग्रता लिएको छ। यस्तै माओवादीले १६, नेपाली कांग्रेसले ५ र अन्यले २ स्थानमा अग्रता लिएका छन्।
एमालेले ताप्लेजुङ, बैतडी, बझाङ, मुगु, म्याग्दी, दार्चुला, ओखलढुंगा, संखुवासभा, धादिङ १ र २, नुवाकोट, दोलखा, पाँचथर, सिन्धुपाल्चोक २, ललितपुर २, डोल्पा र बाग्लुङ १ मा अग्रता लिएको छ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्र १६ स्थानमा आगाडि रहेको छ। माओवादीले रुकुम पश्चिम, रोल्पा, जाजरकोट, सिन्धुपाल्चोक १, कालीकोट, गोरखा १, नुवाकोट २, सोलुखुम्बु, भोजपुर, जुम्ला, रामेछाप, लमजुङ र बाग्लुङ २ मा अग्रता लिएको छ।
नेपाली कांग्रेस ५ स्थानमा अगाडि रहेको छ। रसुवा, बाजुरा, ललितपुर ३ र हुम्लामा कांग्रेस अगाडि छ।
नयाँ शक्ति पार्टी भने हालसम्म गोरखा २ मा मात्र अगाडि देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २२, २०७४, १२:२३:५२